Nin ku qornaa diyaaradii Lion Air ee ku dhacday badda oo ka soo daahay xilliga duulimaadka… – Hagaag.com
Nin ku qornaa diyaaradii Lion Air ee ku dhacday badda oo ka soo daahay xilliga duulimaadka…
Posted on 31 Oktoobar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Nin seegay in uu raaco duulimaadkii Lion Air ee ku burburtay badda, oo saarnaa 189 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale ayaa ku faraxsan inuu seego diyaaradaasi.
Sony Setiawan, oo ah shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Indonesia, ayaa subaxnimadii Isniinta ku qornaa diyaarada burburtay, hadaba jidka ayaa waxaa ku qabsaday zaxmad ama traffic jam, asaga oo ka soo daahay seddax saacadood xiliga duulimaadka, markuu gaaray Madaarka Soekarno-Hatta International ee Jakarta, diyaaradii ayaa ka tagtay.
“Waxaan inta badan raacaa (duulimaad) JT610 – asxaabteyda iyo anigu had iyo jeer waxaan raacnaa diyaaradan,” ayuu Setiawan u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. “Ma garanayo sababta ay waddada jam-ka u aheyd. Caadi ahaan waxaan tagaa Jakarta saacadda 3-da subaxnimo, laakiin saaka waxaan tagay garoonka diyaaradaha 6:20 subaxnimo waxaana i dhaafay duulimaadka. ”
Mar dambe ayuu ogaaday in diyaaradii uu raaci lahaa in ay ku dhacday badda oo dhammaan rakaabkii saarnaa aanu jirin qof ka badbaaday, wuxuu sheegay “Qoyskeyga ayaa ka argagaxay shilka, hooyaday wey iska barooratay, laakin waxaan u sheegay in aan bad qabo oo diyaarada aanan la socon oo duulimaadka ka soo daahay”. ayuu AFP u sheegay.